Amandla okupheka nezinye izinzuzo
Ngokokuqala ngqa, ukukhonkolo kwakhulunywa ngamakhulu eminyaka ekude. Kodwa-ke, phakathi nalesi sikhathi sesikhathi, lesi sici, njengamanye imikhiqizo yokwakha, sidlule ngendlela ende yokuguqulwa.
Ukhonkolo lokuqala lokuqala lwatholwa abavubukuli emfuleni weMfula iDanube eYugoslavia ngo-5600 BC. Ngaleso sikhathi, le nto yokwakhiwa yenziwe kusukela ku-gravel nokubomvu lendawo yendawo.
Namuhla, ukukhonjwa kufanele kuqondwe njengempahla yetshe yemvelaphi yokufakelwa, eyakhiwa ngokuqinisa ingxube exubile kahle ngamanzi, kanye nenqwaba enkulu futhi enhle, ethathwa ngenani elithile.
Isici esibaluleke kunazo zonke isici sokukhonkolo amandla ayo. Amandla okukhonkxa ancike ezintweni eziningi. Inqubo ye-hydration ngokwayo iqukethe izigaba ezimbili:
Ukubamba. Lesi sigaba sigcina cishe usuku. Lapha okuningi kuxhomeke ekushiseni. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ekushiseni kwama-degrees angaphezu kwangu-20, ukubamba ukhonkolo kuzothatha amahora amathathu. Uma ukushisa kwezinga, khona-ke lesi sigaba sizohlala amahora angu-15-20.
Ukuzikhandla. Lesi sigaba siqala ngokushesha ngemuva kwesenzo esedlule futhi sihlala iminyaka eminingana.
Kunoma yikuphi, kufanele kuqashelwe ukuthi amandla okhonkolo adlula kuphela uma kunomswakama. Amandla okukhonkolo futhi ukwakhiwa ngokwayo kuvame ukwanda ngenxa yokuxhumana kwalesi sakhiwo ngamanzi.
Kubalulekile futhi ukucabangela iqiniso lokuthi amandla okukhonkxa imisiwe kokubili eshisayo nesibanda. Yingakho ekushiseni okuphezulu okukhonjiswe ngokugcwele okunconywayo kunconywa ukumboza nge-burlap emanzi ukuvimbela ukugeleza kwamanzi. Ama-indices okushisa okushisa aholela ekuqandeni kwamanzi, okuyingxenye yokuxuba khonkolo. Uma kwenzeka izinga lokushisa elihle, inqubo ye-hydration iyaqhubeka, noma kunjalo, ngalesi sikhathi izici zalesi sakhiwo ziyawohloka, kuhlanganise namandla okhonkolo. Ngenxa yalesi sizathu, ochwepheshe batusa ukungeza izinto ezikhethekile ngesikhathi sokulungiswa kwesisombululo sekhonkrithi .
Amakilasi okukhonkotela amandla
Izinkomba eziyinhloko zokukhonkolo yizi:
Ukukhonjwa kweklasi kwamandla esimweni sokucindezeleka kwe-axial.
Amandla ekhonkolo uma kunesimo se-axial.
Kunezigaba eziningana zokwakhiwa kokhonkolo, okuyinhloko zazo:
Isixazululo sekhredithi yeBrithani ngokuya ngokuqina kweqhwa. Le nhlanganisela isetshenziselwa ekwakhiweni kwezakhiwo ezithintekayo ngokubhekene nokuqhwaza nokuqhaqhaza.
Ibanga lesixazululo sokukhonkolo, kuye ngokuthi ukumelana kwamanzi. Lokhu kusetjenziswa kusetjenziswa ekwakhiweni kwezitshalo ze-hydropower, amachibi, amachiza njalonjalo.
Ngokuya ngezinkomba zezobuchwepheshe nezomnotho, ukwakhiwa kwesakhiwo ngasinye ukukhethwa kweklasi elidingekayo kanye nomkhiqizo wekakhonikhi ingxube eyenziwa ngabanye. Amandla okukhonkolo kulokhu adlala indima ebalulekile. Ochwepheshe batusa ukuthi ukhonkolo lwekhonkrithi olungaphansi kwe-B-15 lusetshenziselwa ukuqinisa izingqinamba zezintambo eziphoqelelwe zikhonkolo. Ngama-arches namakholomu kungcono ukusebenzisa ukhonkolo lweklasi B-20-B-30. Ngama-slabs okhonkolo kanye nemisipha, ukhonkolo lweklasi B-15 kufanelekile.
Ungayifaka kanjani ukugqoka ophahleni ngezandla zakho?
Ukukhetha ukukhiya okunokwethenjelwa kweminyango yangaphakathi
Ukufakwa kwamawindi we-PVC ngokusho kwe-GOST kuyisiqinisekiso sekhwalithi!
Ubukhulu bezinkanyezi: incazelo, izinhlobo kanye nezici
Uhlelo lokuhlinzekwa kwamanzi endlini kanye nokuhlelwa kwalo
Kungani eziqhakaza Fritillaria imperialis? Izizathu eziyinhloko
UAC: vimbela noma ukuxolelwa
Uyini "Jumble"? Umlando amazwibela ezindaba yamahlaya zezingane
Yensimbi chelate: izici nezindlela wokulungiselela
JSC "Volgograd Shipyard": umlando, ukukhiqizwa
Indlela ukumpotopotoza intombazane?
Izimoto ezibizayo kakhulu emhlabeni: Bugatti Type 57SC Atlantic
Caryatid - i-elementi lathumela, okuyinto ethandwa nganoma iyiphi isitayela
Izinzuzo kanye nencazelo kwamandla AD30 uchungechunge
Ukubuyekeza ngokuqhathanisa we abaholi emakethe: trimmers "Stihl FS55" futhi Oleo-Mac Sparta 25
Kanjani ukwenza amabhokisi ophahleni imoto ngezandla zakhe